Voaheloka Ho Nanitsakitsaka Ny Zon’olombelona Nanoloana Ireo Mpitsoa-ponenana Afrikana i Italia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2012 3:16 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, polski, русский, Swahili, Español, Български, Ελληνικά, Français
Ny 23 febroary, didim-pitsarana manan-tantara no navoakan'ny mpikambana ao amin'ny fitsarana eraopeana momba ny zon'olombelona manana ny foibeny ao tamin'ny nanamelohany an'i Italia tsy nisy nandà noho ny fisamborana sy famerenana ireo mpitsoa-ponenana avy any atsimon'i Sahara, izay manitsakitsaka tanteraka ireo fifanekena sy fifanarahana iraisam-pirenena izay nosoniavin'i Italie.
Mpitsoa-ponenana avy any Afrika, sary avy amin'i Vito Manzari tao amin'i Flickr, mampiasa ny license CC-By
Ny bilaogy Unione di Ritti Umani manazava ny zava-misy [it] :
Ny raharaha Hirsi sy ireo hafa mamely an'i Italie dia mikasika ny ezaka voalohany fampodiana natao tamin'ny 6 May 2009, 35 miles tany atsimon'i Lampedusa, tany amin'ny fari-dranomasina iraisam-pirenena. Nosakanan'ny manampahefana Italiana ny sambo iray nitatitra somaliana sy eritreana 200 teoho eo, nahitàna ankizy sy vehivavy bevohoka. Nafindra taminà sambo italiana iray ireo mpitsoa-mponenana ire, naverina tany Tripoli ary natolotra ny manampahefana libiana, tsy araka ny sitra-pony. Tsy nisy akory famantampantarana azy na fihainoana mialoha, na fampahafantarana azy ireo ny toerana tena hitodiany. Ireo mpitsoa-ponenana ireo, raha ny marina, dia resy lahatra fa hoe mizotra ho any amin'ny morontsiraka italiana ny dian-dry zareo. Taorian'io hetsika io, teratany somaliana 11 sy eritreana 13, hita tany Libia sy nampian'ny Filankevitra Italiana misahana ireo Mpitsoa-ponenana no nihetsika nitory an'i Italie teo anoloan'ny Fitsarana Eraopeana, niaraka tamin'ny fanohanan'ireo mpisolovava Anton Giulio Lana sy Andrea Saccucci, avy amin'ny Sendikan'ireo mpisolovava miaro ny zon'olombelona.
GiulioL tao amin'ny bilaogy ilmalpaese.wordpress.com dia namariparitra ny fizotr'ilay hetsika tamin'ny fotoana nahatongavan-dry zareo tao Tripoli [it] :
Tany Tripoli, efa niandry azy ireo teo an-tseranana ny polisy libiana, niarka tamin'ireo fiarabe fitondrana “conteneurs” efa vonona ny hitondra azy ireo, sahala amin'ireny fiarandalamby fitondràna biby fiompy ireny, avy eo dia nandefa azy ireny tany amin'ny fonja samihafa tao amin'ny firenena. Tao anatin'ny mpisafo dia nisy mpaka sary fanao an-gazety, Enrico Dagnino, izay nitantara ny herisetra tao anatin'ity hetsika ity. Tonga avy eo ny sivana.
Ity hetsika ity no nitondra tamin'ny tsy fampiharana ireo foto-kevitra mifehy ny fitantanana ireo olona mandositra loza iray izay hazavain’ i Henry Oliver ao amin'ny bilaogy ukhumanrightsblog [en] :
Io fanosehana hiverina io dia fanitsakitsahana ny toko faha-3 (manohitra ny fampijaliana sy ny fomba fitondra tsy manaja ny maha-olona), ny toko faha-4 amin'ny Fifanarahana faha-4 (fandroahana faobe ireo vahiny) sy ny toko faha-13 (zo hanana fiarovana). Ireo mpisafo izay namerina ireto mpitsoa-ponenana ireto nankany Libia dia nanatanteraka izany tao anatin'ny fanitsakitsahana ny foto-kevitry ny tsy fanosehana hiverina.
T-shirt nanaovan'ny mpitsoa-ponenana iray mivaky hoe "Mpitsoa-ponenana aho "mampiasa ny rano sy savony" mba handosirana ny herisetra, An'i Christiano Corsini tao amin'ny Flickr, ampiasàna ny license CC-by
Ny governemanta italiana taloha narafitry ny antokon'i Silvio Berlusconi, Popolo della libertà (Vahoakan'ny Fahafahana ) sy ny antokon'ny farany havanana, an'i Umberto Bossi, ny Ligin'ny Avaratra, dia nametraka andian-dàlana sy hetsika manohitra ny fifindra-monina mankany Italia, izay efa im-betsaka no nokianin'ny fiarahamonina sivily sy ny eglizy katolika. Im-betsaka ihany koa i Italie no voaheloka noho ny politikany manohitra ny fifindra-monina tsy mifanaraka amin'ny fifanekena erappeana.
Ny bilaogin'i Gabriele Del Grande fortresseurope.blogspot.com, namoaka vaovao momba ny hetsiky ny fikambanan'ireo mpitolona ho an'ny zon'ireo mpitsoa-ponenana, izay namokatra tatitra maro, fijoroana vavolombelona sy horonantsary mikasika ny fomba fitondra ireo mpitsoa-ponenana any Italia sy firenena hafa ao Eraopa, dia manoritsoritra ny fiainana any am-ponja [it] tao Libia nandritra ny fitondràna teo aloha :
Aty Misratah izao izahay, 210 km atsinanan'i Tripoli, aty Libia. Ary ireo voafonja dia eritreana mpangataka fialokalofana daholo, voasambotra tany amin'ny fari-dranomasin'i Lampedusa na tany amin'ny faritra misy ireo mpitsoa-ponenana ao Tripoli. Mizaka tsy satry ny vokatry ny fifanarahana misy eo amin'i Libia sy Italia anoherana ny fitsoaham-ponenana. Olona maherin'ny 600, ka vehivavy ny 58, ary marobe ny ankizy sy zaza menavava. Mifonja efa ho roa taona mahery ry zareo ireo, saingy na iray aza tsy mbola nisy notsaraina. Anaty efitrano mirefy 4 metatra ny sakany, 5 metra ny halavany, tsy misy varavarankely ry zareo no matory, hatramin'ny olona efa ho 20, malao ladina an-tany ambony bodofotsy sy kidoro spaonjy. Rehefa amin'ny antoandro dia mivangongo anaty tokontany iray mirefy 20 metatra amin'ny 20 metatra izay any daholo no mitodika ny varavaran'efitra rehetra, eo ambany fanaraha-mason'ny polisy. Tanora eo anelanelan'ny 20 sy 30 taona ireo. Ny hadisoan-dry zareo ve? Nanandrana hihazo an'i Eraopa mba hangataka fialokalofana.
Ny bilaogy observatoirecitoyen.over-blog.org mamosaka fa :
Ny foto-kevitry ny tsy fanosehana hiverina, voasoratra ao anatin'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1951 mikasika ny satan'ireo mpitsoa-ponenana, dia mandrara ny famerenana olona iray hiverina any amin'ny firenena iray izay loza mitatao ho an'ny fiainany sy ny fahalalahany. …
Mpitsoa-ponenana eo amin'ny 602 no voapaingotra teny an-dranomasina ary naverina avy hatrany teo anelanelan'ny May sy Jolay 2009, nalefa tany Libia indrindra indrindra, firenena iray izay “na iza na iza olona voafonja any dia mety hizaka fomba fitondra faran'izay ratsy tokoa” na mety halefa any aminà firenena iray misy karazana loza mitatao tahaka izany, hoy ny fanamarihan'ny CPT (Comité de prévention de la torture).
Ekena, hoy izy miaiky, “manan-jo tanteraka hiaro ny sisintaniny sy handrindra ny fifindra-monina ireo firenena ireo”, saingy mila miverina mandinika ny fepetrany i Italia mba hiantohana fa ireo mpitsoa-ponenana rehetra tratrany dia, voalohany indrindra, hahazo fikarakaràna sy ho afaka maetraka fangatahana fialokalofana.
Indrisy anefa fa any Eraopa, tsy irery akory i Italia amin'ny fampiharana fampidiana tamba-be atao an-terisetra. Manaitra [it] ity fikambanana ity fa hoe :
Hatramin'ny 1988, 18 058 raha kely ireo olona namoy ny ainy tany amin'ny sisintanin'i Eraopa. Izay ny 2251 dia hatramin'ny nanombohan'ny taona 2011 fotsiny. Navaosina tamin'ny 7 desambra 2011 ireo angona tao ary mifototra amin'ireo angona avy amin'ny fanisàna tany anaty tahirinà gazety iraisam-pirenena nandritra ny 23 taona farany. Mety mbola ho ambony lavitra aza ny tena tarehimarika marina. Tsy misy mahalala hoe firy marina no mety ho faharendrehana nisy izay mety ho tsy rentsika velively. Fa ny fianakavian'ireo nanjavona irery ihany no mahalala, izay hatreo Maraoka ka hatrany Sri Lanka no manontany tena ny amin'izay niafaran-janany nandeha nihazo an'i Eraopa indray andro tany aloha tany, ary tsy niverina intsony.
Paolo Lambruschi, etsy an-daniny, dia nanoratra [it] tao amin'ny tranonkalan'ny gazetin'ny Kaonferansa Episkopaly Italiana hoe :
Ary, zavatra mahazo ny firenena rehetra ao anaty Fiombonambe Eraopeana, naverina nodinihana ny hetsika Frontex ataon'ny mpisafo tao amin'ny ranomasimbe Méditerranée, satria sambany izao ny fanosehana hiverina ireo vondrona teny amin'ny sisintany sy tany an-dranomasina no noraisina ho toy ny fandroahana tamba-be. Ho an'ireo mpitaraina 22 amin'ny 24, izay somaliana ny 11 ary eritreana ny 13, dia tsy maintsy mandoa onitra 15.000 Euros amboniny ho saran'ny fitsarana i Italia. Ny roa hafa dia efa nindaosin'ny fahafatesana.
Ilay tatitra mampiseho ny antony sy ny valim-pitsarana avy amin'ny Fitsarana Eraopeana momba ny zon'Olombeolna dia azo tsidihana eto.
Ny bilaogin'i Gabriele Del Grande fortresseurope.blogspot.com dia mamarana hoe :
Indray andro any, ao Lampedusa sy ao Zouara, ao Samos ao Evros, ao Las Palmas sy any Motril dia hatsangana ny tsangambato hisy ny anaran'ireo rehetra niharan-doza nandritra ireny taona nanaovana herisetra tamin'ny fahalalahana hihetsika ireny. Ary ireo zafikelintsika tsy afaka ny hiteny akory fa hoe tsy nahalala na inona na inna isika. Ity misy fanehoana feno sy fanavaozam-baovao, nanomboka ny 1988 ka hatramin'izao. Raha handalina antontan'isa, isaky ny sisintany tsirairay, vakio ny sarintany Fortezza Europa (Forteresse Europe).